ကုမ္ပဏီကို ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံနဲ့ ရောင်းလိုက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျရတဲ့အခါ.. – Gentleman Magazine
Minecraft ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် ဂိမ်းကို ကြားဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီဂိမ်းကို Markus “Notch” Persson ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က တီထွင်ထားတာပါ။ သူဟာ အဲ့ဒီဂိမ်းကို Microsoft ကို ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလျံနဲ့ ရောင်းခဲ့တာ မကြာသေးပါဘူး။ ၂.၅ သန်းနဲ့ ရောင်းခဲ့ပေမယ့် ကုမ္ပဏီထဲမှာ သူက ၁.၇၅ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါသေးတယ်။
သင်ကတော့ သူ့ရဲ့ ဘဝသစ်မှာ လုံးဝ အိမ်အကောင်းစားနဲ့ ပါတီခံနေရတာ အရမ်းပျော်နေပြီ ထင်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကတော့ Persson ဟာ သူ့ကိုယ်သူ နေရာဆိုးတစ်ခုမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခုထက်ပိုပြီး အထီးကျန်ဆန်တာ မခံစားရခဲ့ဖူးပါဘူး ဆိုပါတယ်။ စိတ်ကျမှု၊ အထီးကျန်မှု၊ အလုပ်မရှိမှုတို့တွေဟာ သူ့ကို သူ့ရဲ့ အရင် Developer ဘဝကို ပြန်သွားချင်စိတ် ဖြစ်စေပါတယ်လို့ သူ့ Tweet တွေမှာ ရေးပြထားပါတယ်။
ဒီလို စိတ်ကျခြင်းဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါတယ်။ Super Bowl ပြိုင်ပွဲတွေမှာ လေးခေါက်ဆက်တိုက် ဗိုလ်ဆွဲဖူးတဲ့ Teddy Bradshaw ဟာ လဲ အဲဒီလို စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအကြောင်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူ Super Bowl တစ်ခါ ဗိုလ်စွဲတိုင်း အဲဒီနေ့တော့ ပျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်လုံး သူ့စံချိန်ကို မချိုးနိုင်မှာစိုးလို့ နောက်တစ်ခေါက် ပြိုင်ပွဲကျရင် မရမှာစိုးလို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကြုံရတော့တာပါပဲ။
အဲဒီလို ခံစားချက်တွေဟာ ခဏခဏ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီးထားပြီး ကြိုးစားကြတယ်။ ပြီးတော့ ရည်မှန်းထားတာလဲ ရရော ခဏလေး အောင်ပွဲခံကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိတော့ပါဘူး။ ဗလာဘဝ၊ ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့ ဘဝကို တွေ့ရတော့တာပါပဲ။
ပစ္စည်းအသစ်တွေ ဝယ်တယ်။ ဇိမ်ခံကြတယ်။ ပါတီတွေ တက်တယ်။ လူတိုင်း သိချင်တဲ့ နောက် ဆက်လုပ်မယ့် အလုပ်တွေအကြောင်းကို ပြောကြတယ်။ အဲဒီမှာ စိတ်ဓာတ်ကျတာ စတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်ဖို့ဖိအား ခံစားရလို့ပါ
ဘယ် CEO မဆို ကံကောင်းလို့ ချမ်းသာသူ မဖြစ်ချင်ကြပါဘူး။ သူတို့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိကြပါဘူး။ သူတို့အပေါ်မှာ ဖိအား အရမ်းများပေမယ့် အောင်မြင်မှာပါဆိုတဲ့ အပြုံးလေးကို မျက်နှာပေါ် အမြဲ တင်ထားရတာ ပင်ပန်းလှပါတယ်။ အဲလို ဖိအားတွေ ရှိနေတာကို သူတို့မိသားစုတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ သိသွားမှာကိုလဲ အရမ်းကြောက်ကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြင်ပလောကကနေ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ထားတတ်ကြတယ်။
အဲဒိမှာ ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့ အနေနဲ့ ဆေးတွေ၊ အရက်တွေ၊ အလွန်အကျွံ အစာစားခြင်း၊ အလုပ် အလွန်အကျွံလုပ်တာတွေ ဖြစ်တာပါပဲ။ သူတို့ စိုးရိမ်တာ နောက်တစ်ခုက သူတို့ ချမ်းသာသမျှ တစ်ချက်ထဲနဲ့ ပျောက်သွားမှာကိုပါ။ အလုပ် တစ်ချက်မှားတာနဲ့ ဒေဝါလီ ခံရမယ်။ အဲလို အတွေးမျိုးကနေ စိတ်ရောဂါတောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလို ခံစားနေရရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ?? လုပ်စရာ ငါးခုရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁. ကိုယ့်ဘာသာ ရိုးသားပါ
သင်က သာမန်လူပါ။ အမြဲ ချမ်းသာ ကျန်းမာနေမယ့် Perfect Human ဖြစ်အောင် မျှော်မှန်းစရာ မလိုပါဘူး။ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်မချမ်းသာလို့ဆိုပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်နေရင်လဲ သင် အဲဒိအခြေအနေက လွတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်လိုတာ အကြံဉာဏ် မဟုတ်ပါဘူး။ နားထောင်ပေးမယ့်သူပါ။ သင့်မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သင့်အတွက် ရှိနေပေးမှာ သေချာပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်လာခဲ့တဲ့ အကျင့်တွေကို ဖျောက်ပစ်ဖို့ ခက်ပေမယ့် သင့်ကိုယ်သင် ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် အရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အရက်၊ ဆေးလိပ် ဖြတ်ပါ။ ကျန်းကျန်းမာမာ စားပါ။ အိပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ သင် ယောဂ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးရင် ခုချိန် လုပ်သင့်ပါပြီ။
၄. ပျော်စရာအချိန်တွေနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ်ပါ
သင်ပျော်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ အဲဒါတွေကို ပြန်ဖန်တီးနိုင်သလား စဉ်းစားပါ။ သင့်ဘဝ ရည်မှန်းချက်ကို ပြန်ဖန်တီးချင်ရင် ဒီ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၅. အတွင်းအပြင် ပြောင်းလဲပါ
ပြင်ပအရာတွေကနေ စိတ်ကို ဖျော်ဖြေဖို့ကြိုးစားနေတာတွေကို ရပ်လိုက်ပါ။ ငွေတွေ၊ ကားတွေ၊ သင် Date လုပ်တဲ့ ကောင်မလေး၊ သင့် စီးပွားရေး အရွယ်အစား အားလုံးက သင့်ကို တကယ်မပျော်စေနိုင်ပါဘူး။ သင် ဂုဏ်ယူရမယ့် အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်ပါ။ ပရဟိတ လုပ်ပါ။ ပြန်ရမယ့် အကျိုး မမျှော်ပဲ အများအကျိုး လုပ်ဆောင်ပါ။ အဲဒါဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါဆိုတာ အကျဉ်းထောင်လိုပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ပြန် အကျဉ်းကျနေတာပါ။ ကောင်းသတင်းကတော့ သင် ထောင်ဖောက်ပြေးဖို့ အတွက် မခက်ပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့ ပြေးနည်း အများကြီး ရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ပထမခြေလှမ်း မစပဲနဲ့တော့ ထောင်က လွတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကုမ်ပဏီကို ဒျေါလာ ၂.၅ ဘီလီယံနဲ့ ရောငျးလိုကျပွီး စိတျဓာတျကရြတဲ့အခါ..
Minecraft ဆိုတဲ့ နာမညျကြျော ဂိမျးကို ကွားဖူးမယျ ထငျပါတယျ။ အဲဒီဂိမျးကို Markus “Notch” Persson ဆိုတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျက တီထှငျထားတာပါ။ သူဟာ အဲ့ဒီဂိမျးကို Microsoft ကို ဒျေါလာ ၂.၅ ဘီလြံနဲ့ ရောငျးခဲ့တာ မကွာသေးပါဘူး။ ၂.၅ သနျးနဲ့ ရောငျးခဲ့ပမေယျ့ ကုမ်ပဏီထဲမှာ သူက ၁.၇၅ ဘီလီယံ ရငျးနှီးမွှုပျနှံထားပါသေးတယျ။
သငျကတော့ သူ့ရဲ့ ဘဝသဈမှာ လုံးဝ အိမျအကောငျးစားနဲ့ ပါတီခံနရေတာ အရမျးပြျောနပွေီ ထငျမှာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ တကယျကတော့ Persson ဟာ သူ့ကိုယျသူ နရောဆိုးတဈခုမှာ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ ခုထကျပိုပွီး အထီးကနျြဆနျတာ မခံစားရခဲ့ဖူးပါဘူး ဆိုပါတယျ။ စိတျကမြှု၊ အထီးကနျြမှု၊ အလုပျမရှိမှုတို့တှဟော သူ့ကို သူ့ရဲ့ အရငျ Developer ဘဝကို ပွနျသှားခငျြစိတျ ဖွဈစပေါတယျလို့ သူ့ Tweet တှမှော ရေးပွထားပါတယျ။
ဒီလို စိတျကခြွငျးဟာ ဖွဈလဖွေ့ဈထ ရှိပါတယျ။ Super Bowl ပွိုငျပှဲတှမှော လေးခေါကျဆကျတိုကျ ဗိုလျဆှဲဖူးတဲ့ Teddy Bradshaw ဟာ လဲ အဲဒီလို စိတျဓာတျကခြွငျးအကွောငျး ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။
သူ Super Bowl တဈခါ ဗိုလျစှဲတိုငျး အဲဒီနတေ့ော့ ပြျောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈနှဈလုံး သူ့စံခြိနျကို မခြိုးနိုငျမှာစိုးလို့ နောကျတဈခေါကျ ပွိုငျပှဲကရြငျ မရမှာစိုးလို့ စိတျဖိစီးမှုတှေ ကွုံရတော့တာပါပဲ။
အဲဒီလို ခံစားခကျြတှဟော ခဏခဏ ဖွဈလေ့ ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ ရညျမှနျးခကျြ ကွီးကွီးထားပွီး ကွိုးစားကွတယျ။ ပွီးတော့ ရညျမှနျးထားတာလဲ ရရော ခဏလေး အောငျပှဲခံကွတယျ။ ပွီးတော့ ဘာဆကျလုပျရမှနျး မသိတော့ပါဘူး။ ဗလာဘဝ၊ ရညျမှနျးခကျြမရှိတဲ့ ဘဝကို တှရေ့တော့တာပါပဲ။
ပစ်စညျးအသဈတှေ ဝယျတယျ။ ဇိမျခံကွတယျ။ ပါတီတှေ တကျတယျ။ လူတိုငျး သိခငျြတဲ့ နောကျ ဆကျလုပျမယျ့ အလုပျတှအေကွောငျးကို ပွောကွတယျ။ အဲဒီမှာ စိတျဓာတျကတြာ စတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နောကျတဈခေါကျ ထပျပွီး အောငျမွငျအောငျ လုပျဖို့ဖိအား ခံစားရလို့ပါ
ဘယျ CEO မဆို ကံကောငျးလို့ ခမျြးသာသူ မဖွဈခငျြကွပါဘူး။ သူတို့ ဘာလုပျလို့ ဘာကိုငျရမှနျး မသိကွပါဘူး။ သူတို့အပျေါမှာ ဖိအား အရမျးမြားပမေယျ့ အောငျမွငျမှာပါဆိုတဲ့ အပွုံးလေးကို မကျြနှာပျေါ အမွဲ တငျထားရတာ ပငျပနျးလှပါတယျ။ အဲလို ဖိအားတှေ ရှိနတောကို သူတို့မိသားစုတှေ၊ ဝနျထမျးတှေ သိသှားမှာကိုလဲ အရမျးကွောကျကွပါတယျ။ သူတို့ကိုယျသူတို့ ပွငျပလောကကနေ အဆကျအသှယျ ဖွတျထားတတျကွတယျ။
အဲဒိမှာ ထှကျပေါကျရှာတဲ့ အနနေဲ့ ဆေးတှေ၊ အရကျတှေ၊ အလှနျအကြှံ အစာစားခွငျး၊ အလုပျ အလှနျအကြှံလုပျတာတှေ ဖွဈတာပါပဲ။ သူတို့ စိုးရိမျတာ နောကျတဈခုက သူတို့ ခမျြးသာသမြှ တဈခကျြထဲနဲ့ ပြောကျသှားမှာကိုပါ။ အလုပျ တဈခကျြမှားတာနဲ့ ဒဝေါလီ ခံရမယျ။ အဲလို အတှေးမြိုးကနေ စိတျရောဂါတောငျ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
အဲဒီလို ခံစားနရေရငျ ဘာလုပျကွမလဲ?? လုပျစရာ ငါးခုရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့
၁. ကိုယျ့ဘာသာ ရိုးသားပါ
သငျက သာမနျလူပါ။ အမွဲ ခမျြးသာ ကနျြးမာနမေယျ့ Perfect Human ဖွဈအောငျ မြှျောမှနျးစရာ မလိုပါဘူး။ သငျ့ကိုယျသငျ စိတျမခမျြးသာလို့ဆိုပွီး မကမြေနပျဖွဈနရေငျလဲ သငျ အဲဒိအခွအေနကေ လှတျမှာ မဟုတျပါဘူး။
သငျလိုတာ အကွံဉာဏျ မဟုတျပါဘူး။ နားထောငျပေးမယျ့သူပါ။ သငျ့မိသားစုနဲ့ သူငယျခငျြးတှကေ သငျ့အတှကျ ရှိနပေေးမှာ သခြောပါတယျ။
နှဈပေါငျးမြားစှာ လုပျလာခဲ့တဲ့ အကငျြ့တှကေို ဖြောကျပဈဖို့ ခကျပမေယျ့ သငျ့ကိုယျသငျ ပွငျဆငျနိုငျမယျ့ အရာတှေ ရှိပါသေးတယျ။ အရကျ၊ ဆေးလိပျ ဖွတျပါ။ ကနျြးကနျြးမာမာ စားပါ။ အိပျပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပါ။ သငျ ယောဂ တဈခါမှ မလုပျဖူးရငျ ခုခြိနျ လုပျသငျ့ပါပွီ။
၄. ပြျောစရာအခြိနျတှနေဲ့ ပွနျဆကျသှယျပါ
သငျပြျောခဲ့ဖူးတဲ့ အခြိနျတှကေို ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ ပွီးတော့ အဲဒါတှကေို ပွနျဖနျတီးနိုငျသလား စဉျးစားပါ။ သငျ့ဘဝ ရညျမှနျးခကျြကို ပွနျဖနျတီးခငျြရငျ ဒီ လှယျကူတဲ့ နညျးလမျးလေးက အကောငျးဆုံးပါပဲ။
၅. အတှငျးအပွငျ ပွောငျးလဲပါ
ပွငျပအရာတှကေနေ စိတျကို ဖြျောဖွဖေို့ကွိုးစားနတောတှကေို ရပျလိုကျပါ။ ငှတှေေ၊ ကားတှေ၊ သငျ Date လုပျတဲ့ ကောငျမလေး၊ သငျ့ စီးပှားရေး အရှယျအစား အားလုံးက သငျ့ကို တကယျမပြျောစနေိုငျပါဘူး။ သငျ ဂုဏျယူရမယျ့ အလုပျတဈခုခု လုပျပါ။ ပရဟိတ လုပျပါ။ ပွနျရမယျ့ အကြိုး မမြှျောပဲ အမြားအကြိုး လုပျဆောငျပါ။ အဲဒါဟာ သငျ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျပါတယျ။
စိတျကရြောဂါဆိုတာ အကဉျြးထောငျလိုပါပဲ။ ကိုယျ့စိတျရဲ့ အကဉျြးထောငျထဲမှာ ပွနျ အကဉျြးကနြတောပါ။ ကောငျးသတငျးကတော့ သငျ ထောငျဖောကျပွေးဖို့ အတှကျ မခကျပါဘူး။ အောငျမွငျတဲ့ ပွေးနညျး အမြားကွီး ရှိပွီးသားပါ။ ဒါပမေယျ့ ပထမခွလှေမျး မစပဲနဲ့တော့ ထောငျက လှတျမှာ မဟုတျပါဘူး။
Previous: ပိုတောင့်တယ်ထင်ရစေဖို့ အဝတ်အစား ဝတ်စားနည်း သုံးခု
Next: သိပ္ပံဝတ္ထုလို့တောင် ထင်ရတဲ့ ဆေးပညာ တီထွင်မှု ၁၀ ခု